Kusukela kwesobunxele: wuDkt Makhosi Dube waseKolishi LezobuHlengikazi KwaZulu-Natal, uSolwazi Fikile Mtshali wase-UKZN, uNks Qhawe Thengwa we-BeyondZero, uSolwazi Orlando Harris wase-University of California noDkt Z Luvuno wase-UKZN-SWITCH.Click here for English version
Abantu abathandana nabobulili obufana nobabo, abashintshe ubulili nabaxube ubulili, phecelezi nakufushane ama-LGBTQI, babhekene nezingqinamba ezihlukene ngokwamalungelo okukhona nelungelo lwezokwelashwa ngokwempilo, kusho iPhini LeSekelashansela leKolishi LezeMpilo lase-UKZN uSolwazi Busi Ncama.
‘Ebantwini abaningi be-LGBTQI kunzima ukuthola abasebenzi bezempilo abanolwazi lwezidingo zabo kanti bacwaswa ngabantu bomshwalense okubambezela noma kukhansele ukunakekelela kwabo ngenxa yokuthi abantu abangama-LGBTQI bazophatheka kanjani’ kusho uNcama.
UNcama ubekhuluma engqungqutheleni yezinsuku ezimbili ebizwa nge-Clinical Care Management for Sexual and Gender Diverse Communities obekukhona ongoti bezempilo abehlukene kuyona.
‘Kumqoka kithina bongoti besifazane ukuqinisekisa ukuthi sinakekela iziguli zethu zonke ngendlela efanele,’ kusho yena.
Lesemina ibiyingxenye yohlelo lomsebenzi okuthiwa Strengthening the Workforce to Improve Treatment and Care of HIV (SWITCH), okuwumkhankaso oxhaswe yi-HRSA owanikwa i-UKZN ngonyaka wezi-2019.
Umdidiyeli ophambili wengosi yokucobelelana uDkt ZamaSomi Luvuno uthe inhloso yalomcimbi bekungukusabalalisa ulwazi lwezinto ze-LGBTQI ekolishi kusetshenziswa izinto zokuqinisekisa izinga ukulekelela abafundi ukuba baqonde izinto ezithinta ezempilo namakhono okunakekela iziguli ezingama-LGBTQI.
Kube nezingxoxo ngezinto ezihlukene okukhona kuzona umphumela wezinkolelo nezobulili eNingizimu Afrika, ukujula kokuqonda amatemu asetshenziswa yimiphakathi yama- LGBTIQA+ nendlela efanele yokusetshenziswa kwamatemu ekwelapheni abantu.
Inhloso bekungukufundisa ngezidingo zezempilo yabantu besifazane abashintshe ubulili, namadoda abhangqe ubulili nathandana nobulili obufanayo ngenhloso yokubheka ezempilo yocansi, kuphinde kugxilwe ekuboneni ukucwasa okucashile ebantwini abanobulili obehlukile.
Kubenezingxoxo ngokuziphatha ngokocansi nangokuya ocansini okuphephile.
USolwazi Harris wase-University of California eMelika ukhombise ukuthi utholakala kanjani umlando ophelele womuntu wocansi kusetshenziswa umhlahlandlela wo-P abahlanu, ukubona abantu abatheleleke ngezifo zocansi nokwelapha abagula ngemuva.
Kwabanye akade bebambe iqhaza bekukhona uNkk Gugu Shabangu waseHhovisi likaNdunankulu, uNks Qhawe Thenjwa we-Beyond Zero, uDkt Sindizama Mthembu wase-KZN Nursing College, uNks Lungile Zakwe wase-Public Services International, izimenenja zezinhlelo zoMnyango WezeMpilo, izithunywa zase-University of Cape Town nezase-Durban University of Technology, nebamba lePhini LeSekelashansela LoCwaningo nokuSha uSolwazi Mosa Moshabela, abamele abaphathi baseUKZN nethimba le-SWITCH.